काठमाडौंमै खाल्डोमा खसेर ट्याक्सी झण्डै पुरियो ! धन्न यात्रुलार्इ केही भएन (फोटो फिचर) | Sagarmatha TVSagarmatha TV काठमाडौंमै खाल्डोमा खसेर ट्याक्सी झण्डै पुरियो ! धन्न यात्रुलार्इ केही भएन (फोटो फिचर) | Sagarmatha TV
काठमाडौंमै खाल्डोमा खसेर ट्याक्सी झण्डै पुरियो ! धन्न यात्रुलार्इ केही भएन (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको गोकणेश्वर नगरपालिका १३ जोरपाटीमा यात्रु लिएर जाँदै गरेको एउटा ट्याक्सी खाल्डोमा खस्दा ड्राइभर सामान्य घाइते भएका छन् । मुख्य सडकमै भएको ठूलो खाल्डोमा मंगलबार बेलुकी ट्याक्सी खसेको हो ।
ढल व्यवस्थापनका लागि खनिएको खाल्डो लामो समयदेखि नबनाइंदा यो बाटो भएर जाने यात्रुका लागि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ ।
बाटोमा ठूलो खाल्डो भए पनि त्यहाँ न कुनै खतराको संकेत राखिएको छ न त कुनै बार नै । सवारी चालकले बाटोमा ठूलो खाल्डो छ भन्ने जानकारी नपाउँदा ट्याक्सी खाल्डोमा खसेको हो । खाल्डोमा खसेको ट्याक्सीको स्थिति हेर्दा पुरिने अवस्था जस्तै देखिन्छ ।
सरकारले सडकको स्तरोन्नति तथा खाल्डा खुल्डी पुर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको भए पनि काठमाडौंकै विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता खाल्डाखुल्डी प्रशस्तै भेटिन्छन् । केही समय अघि कीर्तिपुरमा एक साइकल यात्रीको खाल्डोमै खसेर ज्यान गएको थियो ।